Idaacada Andalus Oo Xarun Cusub Ka Hirgalisay Magaalada Ceel-Cadde Ee Gobalka Gedo.
Monday July 31, 2017 - 12:05:32 in Wararka by Super Admin
Munaasabad ballaaran oo xariga looga jarayay xarun cusub oo Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ay ka hirgalisay gobalka Gedo ayaa ka dhacday magaalada Ceelcadde ee gobalka Gedo.
Xafladda lagu furayay Andalus Faraceeda gobalka Gedo waxaa kasoo qeyb galay mas,uuliyiinta Wilaayada iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan magaalada Ceelcadde.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo Sheekh Cabdi Raxman Abuu Muxamed oo jeediyay Kalimad qayim ah ayaa si weyn usoo dhaweeyay faraca cusub ee Idaacada Andalus ay ka furatay magaalada Ceelcadde ee Wilaayada Islaamiga Gedo.
Sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka magaalada Ceelcadde oo iyaguna goobta munaasabada ka hadlay ayaa sheegay iney si weyn ugu faraxsanyihiin in Idaacada Andalus guryahooda loogu keenay.
Magaalada Ceelcadde ayaa ah magaalo taariikhi ah waxaana magaalada ku yaala saldhigii sanad iyo bar ka hor lagu xasuuqay askarta Nasaarada Kenya kaasi oo lagu dhex dilay inka badan Labo Boqol oo askar Kenyaati ah.
Waa Faracii 9-aad ee Radio Andalus uu ka furto gobollada dalka Soomaaliya waana warbaahinta kaliya ee wararkeeda mar qura laga wada dhageysto magaalooyin dhowr ah oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Halkan ka dhageyso Warbixin ku saabsan Furitaanka Andalus Faraca Ceel-Cadde MP3